Changing icon — MYSTERY ZILLION
MZ မှ အကို အမ များရှင့်
CCleaner.exe , G-talk.exe, Game.exe вЂ¦စသော .exe files များ .bat вЂ¦.files များ၏ icon တို့ကိုနှစ်သက်ရာ icon ပုံစံပြောင်းလို့ရတဲ့ software များရှိပါလား၊ မည်သို့ပြောင်းရသည် မည်သို့သုံးရသည်ကိုလည်းရှင်းပြပေးပါရှင့်၊
အကိုရေ... rapidshare ကအခက်အခဲရှိလို့ တခြားဆိုက်ကတင်ပေးပါလား အကို .. ဖြစ်နိုင်ရင်ပြောတာပါ ..:)
ifile.it မှာတင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ။
တခြား ကွန်ပြူတာက ကြည့်ရင်လည်း ပြောင်းထားတဲ့အတိုင်းမြင်တာလား။ ရိုးရိုးပဲ မြင်တာလား ခင်ဗျာ.....
ကျွန်တော်ကတော့ မော်မော် ပြုံးဆီကရတဲ့ icon packager လေးကိုသုံးတယ်...သူကတော့ တခြားကွန်ပြူတာမပြောနဲ့ ယူဇာအကောင့်မတူရင်တောင်မှ မိုင်ကွန်ပြူတာတို့...မိုင်ဒေါ့ကျုမန့်တို့ကို မပြောင်းပေးတော့ဘူး.... ဆော့ဖ်၀ဲလ်အလိုရှိသူများ....မော်မော် မောင်ပြုံးထံတွင်တောင်းခံပါရန်....(ဟီဟိ...မလိုက်ပြီ )
Thanks you very much ...But....
They are Access Denied.
mediafire is will be ok. if it's can't pls direct link &
CCleaner.exe , G-talk.exe, Game.exe &#8230;စသော .exe files များ .bat &#8230;.files များ၏ icon တို့ကိုနှစ်သက်ရာ icon ပုံစံပြောင်းလို့ရတဲ့ software များရှိပါလား
ဟုတ်ကဲ့ .. ကျွန်တော့်သဘောပြောရရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ရင်မပြောင်းစေချင်ဘူး ခင်ဗျ...ဘာဖြစ်လို့့လဲဆို တော့ သက်ဆိုင်တဲ့သူများ ကအကောင်းဆုံးလို့ပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့ အရာလေးတွေပါ .. ပြောင်းချင်ရင် တော့ ပြောင်းပေးလို့တဲ့ Utilities တွေတော့ အများကြီးပါဘဲ .. တစ်ခြားဟာတွေမသုံးဘဲနဲ့ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့နည်းကို ပြောရရင်တော့ .. Windows ထဲမှာ Build in ပါတဲ့ mspaint နဲ့ကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ် .. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံလေးတစ် ပုံကို mspaint မှာ 50 x 50 pixel ဆိုဒ်ထားပြီး သိမ်း တဲ့အခါ ဖိုင်အမျိုးအစားက .bmp (bitmap လို့ဆိုလိုတာပါ ချဲ့လိုက်ရင်၀ါးသွားတတ်ပါတယ်) ဖိုင် name ပေးတဲ့အခါ .ico (icon ဖိုင်လို့ဆိုလိုတာပါ) လို့ သိမ်းပေးလိုက်ရင် Desktop မှာ မြင်ရပါပြီ(သိမ်းခဲ့ရင်) .. ဒါကအခြေခံ လောက်ကို ပြောပြတာပါ .. တကယ်တမ်း Professional လုပ်မယ်ဆိုရင် တခြား Graphic ပိုင်းဆိုင်ရာ များနဲ့ တစ်ခြားအပိုင်းများ အများကြီးကို ရှိပါသေးတယ် .. စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦ[FONT=&quot]း[/FONT]
I tried to change ms-dos file, cmd file, and bat file.
To change them, type " control folders
ကျွန်တော် နားလည်သလောက်ပြောရရင် ကို (သို့) မ ချိုချိုလုပ်ချင်တာက exe ဖိုင်ပုံစံကို နှစ်သက်ရာ ပုံစံလုပ်ချင်တာပါ....
short cut .exe ကို ပြောင်းချင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ မူရင်း .exe ကို ပြောင်းချင်တာပါ။ သူများ ကွန်ပျူတာမှာ ယူပြီးဖွင့်ရင်လည်း ပြောင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲ ပေါ်ချင်တာပဲ...
ကို (သို့) မ ချိုချို လိုချင်တဲ့ဆော့၀ဲလ်က မြင်တော့ မြင်ဖူးတယ်. မသိမ်းထားမိဘူး။ ကျွန်တော်ပြန်ရှာထားလိုက်ပါ့မယ်... တွေ့ရင် တင်ပေးပါ့မယ် ခင်ဗျာ....